» “कुलमानको विषय,लाई लिएर प्रचण्ड र देउवाबीच किन भयो भ’नाभन ? “कुलमानको विषय,लाई लिएर प्रचण्ड र देउवाबीच किन भयो भ’नाभन ? – हाम्रो खबर
“कुलमानको विषय,लाई लिएर प्रचण्ड र देउवाबीच किन भयो भ’नाभन ?
“काठमाडौं । नेपाल विद्युत विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, शेरवहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष्पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भनाभन भएको बुझिएको छ । प्रचण्ड तत्काल कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने योजनामा थिए भने देउवा तत्काल सो विषयलाई टार्ने मनस्थितीमा थिए ।”
गत सोमबार बसेको, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुषालले कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पेश गरिन् । उनले हाल रहेका कार्यकारी निर्देशकलाई उचित ब्यवस्थापनको प्रस्ताव पनि लगेकी थिइन् । तर प्रधानमन्त्री देउवाले चासो नदिएका कारण नियुक्तीको निर्णय भएन ।”
त्यसको जानकारी ,पाएका प्रचण्ड तत्काल देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे । उनीहरुकाबीचमा यो विषयलाई लिएर भनाभन पनि भएको स्रोतले जनाएको छ । । देउवालाई अहिले नै कुलमान घिसिङलाई ल्याएर कुनै ठूलो उपलब्धि हुने नदेखेर उनलाई प्राधिकरण फर्काउने प्रस्तावबारे पछि निर्णयमा पुग्ने मुडमा थिए । तर, प्रचण्ड आफैँ बालुवाटार गएर दबाब दिएपछि कुलमानलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिने निर्णय प्रधानमन्त्री देउवा पुगेका हुन्
“कुलमानका विषयमा कुनै निर्णयबीना बैठक सकिएपछि प्रचण्ड बालुवाटार पुग्दा बैठक सकिएर केही मन्त्रीहरु फर्की सकेका थिए ।तर, प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग कुलमानको नियुक्तको किन निर्णय नगरेको भन्दै प्रश्न उठाए । देउवाले कुलमानलाई नियुक्ती गर्नेभन्दा पनि पहिलो प्राथमिकता मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्नु हो भन्दै देउवाले जवाफ दिएका थिए ।”
“देउवा र प्रचण्ड बीच एकछिन यहि विषय मा भनाभन भयो । तर अन्त्यमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाएर बैठक सकिएपछि उक्त प्रस्तावमा निर्णय गर्न लगाएका थिए । सोमवार अबेर कुलमानलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गर्ने निर्णय भएको भएपनि त्यसबारे सार्वजनिक गरिएन ।”